Shaqaalaha Haweenka ee Jabbaan ayaa garaacay Mareykanka iyo Yurub - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 8, 2021 0 comments
Haweenka haweenka ah ee Japan ayaa kordhay, waxayna ka sare mareen Yurub iyo Mareykanka boqolkiiba, sida ay sheegtay Kathy Matsui, gudoomiye kuxigeenkii hore iyo madaxa istiraatiijiyadda Japan ee bangiga maalgashiga caalamiga Goldman Sachs. “Womenomics”, waa eray ay iyadu abuurtay, waxaa soo dhaweysay Shinzo Abe, Raiisel Wasaarihii hore ee caanka ahaa, kaasoo qaaday talaabooyin haweenka loogu ogolaanayo inay qeyb weyn ka qaataan dhaqaalaha dalka
Waxay tiri, waagii hore tirada haweenka ka shaqeeya way yareyd; isbeddelkani maanta wuu ka duwan yahay. Boqolleyda haweenka shaqeeya waxay ku dhowaayeen 72% kahor faafitaanka, iyo 67% Maraykanka iyo 63% Yurub, ayay tiri. Si kastaba ha noqotee, waxay sheegtay inay weli jiraan caqabado iyaga hortaagan inay la wareegaan jagooyinka hoggaaminta, marka loo eego waddamada horumaray. Saamiga haweenka maareeyayaashu waxay gaarayaan 15% iyo heerka haweenka ee agaasimayaasha guddiga waa hal lambar, ayay tiri.
Matsui waxay ku dartay shaqo bixiyayaashu inay dareemaan inay masuul ka yihiin xoojinta bulshada haweenka oo ay siiyaan kaalmaha maamulka.
# bulshada dumarka ah